fanafarana ovy - magazine "Potato System"
Tena Label fanafarana ovy
Label: fanafarana ovy
Ozbekistan dia namoaka VAT tamin'ny fanafarana ovy
Ao Ozbekistan, nanomboka ny 14 Oktobra ka hatramin'ny 21 Oktobra, niakatra 43% ny vidin'ny ovy. Mba tsy hisian’ny fisondrotan’ny vidin-tsakafo, miaraka amin’ny...
Rosia dia manafatra ovy avy any Iran, Moldova ary Kyrgyzstan
Raha ny filazan'ireo mpandinika ny EastFruit dia mirakitra vidiny lafo ho an'ny ovy azo amidy eny Russia ary tahotra ny tsy fahampian'izy ireo amin'ny vanim-potoana 2021/22 ...
Mitombo hatrany ny famatsiana ovy Okrainiana any Belarus
Tamin'ity taona ity i Belarus dia sambany manafatra ovy be loatra amin'ny filan'ny tsena anatiny mandritra ny fijinjana. Vatsy be dia be ...
Ny vidin'ny ambongadiny ho an'ny ovy any Ozbekistan dia nitombo 17%
Nanomboka nisondrotra ny vidin'ny ovy any Ozbekistan. Tao anatin'ny tapa-bolana lasa, ny vidin'ny ambongadiny ho an'ny vokatra dia nitombo 17%, na teo aza izany ...
Belarus dia manafatra ovy avy amin'ny firenen-kafa
Tao anatin'ny fararano dia nipoitra ny ovy nafarana tao amin'ny magazay tao amin'ilay firenena. Ny antony lehibe indrindra dia ny tsy fahampian'ny vokatra manana kalitao manokana, ny fiompiana ovy amin'ity ...
Mbola zava-dehibe ny raharaha fivarotana laisoa any Rosia